सञ्चार माध्यमलाई छुनै हुन्न, करेन्ट लागेजस्तो बुरुक्क उफ्रिहाल्छन् – प्रधानमन्त्री ओली — Sanchar Kendra
सञ्चार माध्यमलाई छुनै हुन्न, करेन्ट लागेजस्तो बुरुक्क उफ्रिहाल्छन् – प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालका सञ्चारमाध्यमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरकारले गरेका राम्रा काम नदेखेको र विरोध मात्रै गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सञ्चारमाध्यमको आलोचना गरेका हुन् ।
सञ्चार क्षेत्रलाई केही भन्यो भने आफूविरुद्ध लाग्ने गरेको पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । सञ्चारमाध्यमले सरकारलाई दिनहुँ गाली गर्दा सहनुपर्ने तर सञ्चार माध्यमलाई आफूले एकपटक सुझाव दिँदा सहन्न भन्ने प्रवृत्ति सम्पादकहरूमा देखिएको उनले बताए । सरकारलाई सुझाव दिने र सरकारको आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यमले पनि अरूले भनेको सहनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
‘यो सञ्चार जगत यस्तो हो अरु जसलाई जे भने पनि छुट पाइन्छ । सञ्चारमाध्यमलाई अलिकति चिसिक्क भयो भने खपिसक्नु हुँदैन । एकदम सेन्सेटिभ नि ! यसो छोयो भनेदेखि बुरुक्क उफ्रिहाल्ने । करेन्ट लागेजस्तो,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अलि अगाडि मसँग सञ्चारकर्मीहरू, सम्पादकहरूले भेट्नुभयो । तर, उहाँहरूले मलाई ‘हामीलाई यसो किन भन्नुभयो ?’ भनेर भन्नुभयो । मैले भने तपाईंहरूले दिनरात गाली गर्दा हुन्छ । मैले अलिकति भने भने तपाईंहरू दिनरात गाली गर्ने । मैले किन यसो गर्‍यौ भन्दा सहनुपर्छ भनेर सिकाउने । अनि मैले अलिकति भन्दा सहन नसक्ने के हो यो ?’
प्रधानमन्त्रीले थपे, ‘आफूले भनेको भन्यै गर्ने, यसो नगर्नुस् न भन्दा सहन सिक्नुपर्छ भन्ने ? मैले अलिकति सुझाव दिएँ भने सहन्नँ भनिहाल्ने ?’ नेपालमा अगाडि बढ्न चाहनेहरूको खुट्टा तान्ने प्रवृति रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । बाकसमा रहने भ्यागुताको उदाहरण दिँदै उनले कोही पनि अगाडि बढ्न नसक्ने गरी खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति नेपालमा रहेको बताए ।
सञ्चारमाध्यमको ‘निगाह एकातिर र निशाना अर्कैतिर’ हुन नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । सरकार र सञ्चारमाध्यम ‘गुड अन्डरस्ट्यान्डिङ र गुड फेथ’का साथ अगाडि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव थियो । सञ्चारमाध्यमले गल्ती गरेको देखेमा आलोचना गर्न पाउने उनको भनाइ थियो । सञ्चारमाध्यमले गर्नुपर्ने कामबारे उनले भने, ‘जनतालाई सुसूचित गर्ने, सरकारलाई छिटो काम गर्न अभिप्रेरित गर्ने, गल्ती नगर्न खबरदारी गर्ने ।’
उनले भने, ‘अहिले कोभिड- १९ को कारणले निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा छौं । दुनियाँ नै अप्ठ्यारो अवस्था छ । अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिदर माइनस ३२, भारतको माइनस २४, चाइनाको माइनस ७ मा गयो । नेपाल माइनसमा गएको छैन । सन्तोषको कुरा हो ।’ कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा आइनसकेकाले अझै चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो ।